Taariikhda sii deynta ee IPhone 11 ayaa xaday! | Wararka IPhone
Agoosto iyo Sebtember ... Waxaan ku dhownahay inaan ogaanno moodooyinka cusub ee iPhone-ka ah ee Apple ay noo diyaarisay sannadkan, runtiina waxay tahay in wararka xanta ah iyo xogaha aan ku aragnay ee ku saabsan boosteejooyinkan ay si cad ugu muuqdaan kamaradda saddex-geesoodka ah dhabarka iyo faahfaahinta kale sida naqshad la mid ah tan moodooyinka iPhone ee hadda jira. Laakiin waxaa jira faahfaahin muhiim ah oo had iyo jeer qaadata waxoogaa waqti dheer ah si loo shaandheeyo shabakadda iyo warbaahinta, tanina maahan wax kale oo aan ahayn soo bandhigidda suurtagalka ah iyo taariikhaha soo socda ee soo socda.
Xaaladdan oo kale, waxa aan ku hayno miiska waa daadad cad oo leh taariikhda la sii daayo ee moodooyinka cusub ee iPhone. Warqad warqad ah ama sharci ku yaal Japan Waxay daaha ka qaadi lahayd sanadkaan warka ah, sidaan idhaahdo, way adagtahay in la muujiyo. Taariikhda soo bandhigida iPhone-ka waxay noqon kartaa ...
Sibteembar 10 sida ku xusan SoftBank
Waana in Madaxweynaha SoftBank oo ah shirkad isgaarsiineed oo ku taal Japan uu si kama 'ah u sii deyn lahaa taariikhda la soo saaray ee moodooyinka cusub ee iPhone 11, gaar ahaan loogu talagalay soo socota Sebtember 10. Tani waxay ka dhigan tahay haddii ay run tahay in waddammadii ugu horreeyay ee haysta taleefannada gacanta ee Iphone-ka ay iibsan karaan ay heli doonaan iyaga 7 maalmood ka dib ugu badnaan, taas oo ah in la yiraahdo 17-ka isla bishaas qiyaastii.
Waxay ku soo beegantay in taariikhda soo bandhigidu ay tahay Talaado, gaar ahaan ta usbuuca labaad ee bisha oo sidaas darteed Apple waa inay u dirtaa casuumaadaha warbaahinta ugu horreyn bisha soo socota. Waan ku dhownahay sidaas darteedna waa inaan dulqaad yeelannaa.
Jidka, si aan u sharaxno tan ku saabsan sharciga ka jira Japan iyo siibitaanka madaxweynahooda, Ken Miyauchi, waxaan si kooban u dhihi doonnaa shirkii maalgashiga waxaa wax laga weydiiyay arrin cusub sharciga dhaqan galaya 1da Oktoobar gudaha dalka oo ku qasbaya inay kala soocaan xirmooyinka aaladaha dhamaadka sare, sicirka xogta iyo heerarka codka. Marka waxaa la weydiiyay waxa SoftBank ay ka yeeli doonto iPhones-ka cusub madaxweynuhuna wuxuu sharaxaad ka bixiyay "ku dhowaad 10 maalmood" waxba ma dhicin, marka wuxuu si aan ula kac aheyn shaaca uga qaaday taariikhda bilaabida qiyaastii MacOtakara barnaamijka loogu talagalay Sebtember 20 usbuuc ka dib soo bandhigiddiisa rasmiga ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Taariikhda sii deynta ee IPhone 11 ayaa xaday!